Ahoana ny famelana ny fanovana ny alina eo amin'ny Mac
Ampiheno ny Eyestrain sy ny torimaso tsara
Ny safidy Night Shift ao amin'ny Mac dia mitondra tombony maro, anisan'izany ny eyestrain sy ny torimaso tsara kokoa. Izany dia be dia be avy amin'ny zavatra tsy dia mazava loatra amin'ny endriny tsotra amin'ny Mac OS. Night Shift dia manova ny fandanjalanjana loko eo amin'ny mozika Mac, mampihena ny hazavana manga amin'ny ora hariva, ary mamerina indray ny blues amin'ny andro.
Ao amin'ny fanoritsoritana ny Night Shift, manazava i Apple fa ny fampihenana ny hazavana manga sy ny fanovàna ny lanjan'ny loko mankany amin'ny fiafaràna milamina dia mamokatra sary izay mora kokoa amin'ny maso. Nilaza ihany koa i Apple fa ny tsy fahampian'ny eyestrain amin'ny ora hariva dia mampiroborobo ny torimaso tsara kokoa.
Na dia efa matory tsara aza aho, fa ny maro no nilaza fa ny fitadiavana ny fanaraha-maso ny Night Shift sy ny fametrahana ny serivisy dia mety ho trotraka. Noho izany, andeha hojerentsika ny fomba ahazoana ny Night Shift miasa ho anao.
Fepetra takiana minitra takatry ny alina
Mino izany na tsia, ny takelaka Night Shift dia manana fepetra faran'izay kely farafahakeliny, ary ireo fepetra ireo dia miankina amin'ny mpisera maro, mieritreritra fa vonona ny hiova ho an'ny Night Shift ny Macs, raha araka ny filazan'i Apple, ny Mac sy / na ny displays dia tsy tohanana.
Mba hampiasana ny Night Shift, ny Mac dia tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny lisitra eto ambany, sy ny famokarana macOS Sierra 10.12.4 na aoriana.
Mac mini: faran'ny 2012 (Macmini6,1) na vao haingana
21.5-inch iMac : faran'ny taona 2012 (iMac13,1) na vao haingana
27-inch iMac: faran'ny 2012 (iMac13,2) na vao haingana
Mac Pro: faran'ny taona 2013 (MacPro6.1) na vao haingana
12-inch MacBook : aloha ny taona 2015 (MacBook8.1) na vao haingana
11-inch MacBook Air: mid 2012 (MacBookAir5,1) na vao haingana
13-inch MacBook Air: mid 2012 (MacBookAir5,2) na vao haingana
13-inch MacBook Pro : mid 2012 (MacBookPro9,2) na vao haingana
15-inch MacBook Pro: mid 2012 (MacBookPro9.1) na vao haingana
Night Shift koa dia manohana ireto endriky ny ivelany:
Fanamarihana : Ny lisitr'ireo mpandrindra fanohanana dia kely, nefa toa tsy tena manelingelina ny fampiasana Night Shift izany. Mpisera maro no nahomby tamin'ny fampiasana ny Night Shift tamin'ny marika sy ny modely hafa.
Raha toa ka mifanaraka amin'ireo fepetra voalaza etsy ambony ireo ny Mac, dia tokony ho afaka mamela ny Night Shift ary hampiasa ny endri-tsainy.
Manome sy manara-maso ny mozika amin'ny alina
Ny interface interface Night Shift dia nampidirina tao amin'ny fisehoan-toerana efa misy. Azonao ampiasaina ny fisehoana fisehoana fisehoana ahafahana miditra ny Night Shift, mametraka fandaharam-potoana, ary manitsy ny hafanan'ny loko amin'ny fampiratiana rehefa mihazakazaka ny Night Shift.
Atsofohy ny safidin -tsarimihetsika amin'ny alàlan'ny fanindriana ny icon ao amin'ny Dock , na amin'ny fisafidianana ny safidinao ao amin'ny menio Apple .
Misafidiana fikandrana misimisy.
Raha mifanaraka amin'ny fepetra rehetra voalaza etsy ambony ny Mac ou dia hahita ny takelaka Night Shift ; Mandehana ary mifidiana izany. Raha tsy hita ianao ny tabilao Night Shift , dia hahita toro-hevitra momba ny olana sy fomba hafa ahafahana manova ny asan'ny Night Shift ao amin'ity lahatsoratra ity.
Ampiasao ny sakafo fanodinana ny fandaharam-potoana mba hamerenana ny Alin'Andrimanitra, ampiasao ny fananganana Sunset na ny androany, na mamoròna fandaharam-potoana manokana.
Fiverenana mankany amin'ny fiposahan'ny masoandro : Hitodika amin'ny alina ny toetr'andro eo an-toerana ary hitodika amin'ny alina miala amin'ny fiposahan'ny masoandro eo an-toerana.
Fomba fanao : Azonao atao ny mifidy ny fotoana Night Shift hiditra ary hamono.
Off : Miova ny alina.
Ataovy ny safidinao avy amin'ny sakafo fanontana .
Azonao atao ihany koa ny manova ny Night Shift, na inona na inona amin'izao fotoana izao. Raha hamadika ny alina ny Shift, dia mametraha marika famantarana ao amin'ny boaty Manual . Rehefa mivadika manitsy, ny Night Shift dia hijanona mandra-pahatongan'ny fiposahan'ny masoandro ny ampitson'iny, na mandra-piverin'ilay izy, na amin'ny fandaharam-potoana manokana na fanesorana ny marika famantarana ao amin'ny boaty Manual .
Ny lanjan'ny Tempoly Color Temperature dia mametraka ny hafanana entina rehefa miseho ny Shift Night. Raha tsindrio ny bokinao ary tanterao ny tsindry, dia ho hitanao ny fijerinao ny fomba fijerinao ny Night Shift. Tohizo ny tsindry raha tsy tapitra ny vokatra tianao.
Mampiasa ny Ivontoerana fanamarinana mba hifehy ny alina
Raha toa ny fisehoan-tsarimihetsika fisehoan-javatra (interface) ny endri-dàlana voalohany amin'ny Night Shift, dia azonao ampiasaina ihany koa ny Centre Notifidianana mba ahafahana manova ny Night Shift manomboka na miala.
Sokafy ny Ivontoerana Fanamarihana amin'ny alalan'ny fihodina miankavia amin'ny rantsantanana roa eo amin'ny fitoeranao trackpad, na amin'ny tsindrio ny singa momba ny fampandrenesana ao amin'ny bar de menu. Rehefa misokatra ny Ivontoeran'ny Fampandrenesana, miarena eo an-tampony mba hahitana ny fiovan'ny Night Shift. Tsindrio eo amin'ny famolavolana ka manova ny Night Shift manitsy na afara.
Famerenana ny alina
Ny Night Shift dia tsy mitsahatra ny maneho: Ny anton'izany dia ny Mac no tsy mahafeno ny fepetra farafahakeliny, araka ny voalaza etsy ambony. Azo atao ihany koa ny olana raha mampiasa fampirimana ivelany ianao miaraka amin'ny fampisehoana ny Mac ou. Raha sambany ianao no niezaka ny miditra amin'ny Night Shift taorian'ny fanavaozana ny dikan-teny maoderin'ny Night Shift amin'ny Mac OS, dia mety mila manao ny resetana NVRAM amin'ny Night Shift ianao.
Ny endriky ivelany dia tsy mampiseho ny fiovan'ny loko Shift Night, na dia ny mpanara-maso akaiky indrindra aza: Ity dia olana kely amin'ny Night Shift. Nilaza i Apple fa miasa i Shift Night amin'ny fampisehoana ivelany, fa koa milaza fa tsy hiasa amin'ny tetikasa na televiziona. Ireo karazana endritseho ivelany ireo matetika dia mifandraika amin'ny seranan-tsambo HDMI, ary izany angamba no olana tena izy; Maro amin'ny olona milaza ny olana momba ny ivelany no mampiasa ny fifandraisana HDMI. Andramo ny fampiasana ny Thunderbolt na ny fifandraisana Port Port.
Ny Night Shift amin'ny Mac dia miasa tsara amin'ny modely maoderin'i Mac. Izany dia noho ny famaha ny codecode tsotra amin'ny versione iOS an'ny Night Shift. Ny tsara indrindra azoko jerena, ny Night Shift dia mampiasa ny rafitra CoreBrightness ary rehefa tsy mahita ny dikan-teny vao haingana ny MacOS ny MacOS, ny Night Shift dia kilemaina.
Raha tena tsy maintsy manana ny Night Shift ianao ary vonona ny hamaky ny Mac anao, dia azo atao ny manolo ny rafitra CoreBrightness miaraka amin'ny dikan-drakitra izay mamela ny Night Shift hihazakazaka. Azonao atao ny mahita ny antsipiriany ao amin'ny Night Shift amin'ny Mac tsy notapahina.
Mariho azafady: tsy manoro hevitra aho ny hametaka ny rafitra CoreBrightness. Nomeko io rohy etsy ambony io ho an'ny mpampiasa Mac izay efa nandray fepetra ara-drariny, anisan'izany ny famerenana azy amin'izao fotoana izao , ary iza no manana Mac hafa ho ampiasaina amin'ny fanandramana.
Ny vahaolana tsara kokoa dia ny fametrahana an'i F.lux, fampiharana iray izay manao ny asany mitovy amin'ny Night Shift saingy hihazakazaka amin'ny Mac sy ankehitriny. Manana endriny maro hafa koa izy, anisan'izany ny fanohanana tsara kokoa ny fampisehoana ivelany ary ny fahafahana mamaritra fampiharana izay hanafoana ny F.lux tsy hihazakazaka (fiheverana manan-danja rehefa miasa miaraka amin'ny apps mila fiority loko), ary koa ny fandaharam-potoana sy ny loko tsara kokoa fanaraha-maso ny hafanana.
Fantaro bebe kokoa momba an'i F.lux, izay Tom's Mac Software Pick .
Azonao atao ny mahita fanazavana fanampiny momba ny fanesorana hazavana manga amin'ny fampisehoana ny ordinateranao, ary koa ny fampiharana fanampiny izay manao ny sivana manga ho anao, ao amin'ny lahatsoratra: 6 Blue Light Filter Application Fampihenana ny endri-tsoratry ny dite .
Ahoana ny fomba hanovana ny tranokalanao amin'ny Safari
Mac Sharing Sharing: Mac Printer Mizara Amin'ny Windows XP
Ahoana ny fomba hanovana ny fanovana Accessibility amin'ny Safari 8 ho an'ny OS X Yosemite
MacOS Disk Utility afaka mamorona ari-maso RAID efatra
OS X Mountain Lion Clean amin'ny fametrahana fiara tsy manomboka
Ahoana ny fahitanao ny Mac OS X Mail manao ny zava-misy
Ampiasao Dropbox amin'ny Sync iCal amin'ny OS X taloha
APFS Snapshots: Ahoana ny famerenana miverina any amin'ny fanjakana efa fantatra taloha
Fantaro ny fandefan'ny fifandraisana amin'ny Gmail mitovy amin'ny Gmail
Inona ny Bitcoins? Ahoana ny fomba fiasa Bitcoins?
Ahoana ny fampiasana AutoText amin'ny Microsoft Word
Ny endriky ny famolavolana grafika
Afaho ny Apps iPhone avy amin'ny App Store
Ahoana ny fijerena rakitra MP3 ho an'ny diso
Asaivo apetraka Mac Apps mba hanokafana amin'ny sehatra Desktop voafaritra manokana
Inona no dikan'ny GTFO?
Torolalana amin'ny Technique Lighting 3D an'ny Digital Animation
Fomba ahoana no hanalavirana olana amin'ny fakantsary fakantsary
Ny fomba hikarakarana haingana ny Mac anao
Temple Run 2 Tips sy Powerups
Ahoana ny fampiasana DVD Converter amin'ny TV, VCR, ary DVD Recorder
Ahoana no hanovana sy hanova ny sary ao amin'ny iPad
Ny Tompon'ny Rings: Battle for Earth Middle II Cheats
Mampihatra sisintany iray ho ampahany amin'ny rakitrao amin'ny teny
Top Tips for Bloggers Beginner
Google Home vs Amazon Echo: Iza no tsara indrindra ho anao?
Ny fiara fitaterana Google "Moonshot"
Ahoana no ahafahanao mahita ny adiresy IP amin'ny tranonkala rehetra ao anaty vitsy kely fotsiny